Kukho iindlela ezimbalwa onokukunceda ekuphuhlisweni kweli phepha
Izintlu zokukhangela zeentaka: Ndiqhubeka ndisebenza kwi-data distribution. Ukuba unezilungiso okanye izongezo zokwenza uluhlu lokutshekisha olukhoyo, okanye uluhlu lokutshekisha kummandla omtsha ongeyifakile, ndingathanda ukuva kuwe.
Idibanisa yolwazi lobomi: Olunye ukongezelela olulandelayo kwiphepha liya kuba nolwazi malunga neentaka zobomi beentaka. Ndiye ndaqala ukuqokelela ulwazi malunga nobukhulu be-clutch, ixesha lokutshala, iirhafu zokusinda, njl njl, ngakumbi kwiintaka zaseNyakatho Melika, kodwa kusekho indlela ende yokuhamba kuzo zonke iintlobo zeentaka. Naluphi na ulwazi onokukubonelela malunga nembali yokuphila luya kuxabiswa kakhulu.
Ukuguqulelwa: Le sayithi isele ikhona ngeelwimi eziliqela, kwaye ndihlala ndifuna ukuzongeza ezintsha. Ukuba unomdla wokubonelela inguqulelo entsha, ndinokuthumela ifayela le-Excel eliqulethe isicatshulwa sale ndawo (ngamagama angama-6000). Ndihlala ndikhangelelanisa iintlobo zeentaka ngezinye iilwimi.
Ndiyathanda ukubonga wonke umntu oye wanceda wam ukwakha i-Avibase kwiminyaka. Nangona ndenze konke okusemandleni okubandakanya amagama abo bonke abancedisayo kwoluhlu olungezantsi, ndixolisa kwangaphambili kunoba ngubani na ukuba ndilibale. Ndiza kufaka igama lakho xa undiqhagamshelana nam. Ngakolunye uhlangothi ukuba, ngenxa yezizathu ezithile, ukhetha ukuba igama lakho alibonakali kuleluhlu, nceda undixelele.
* ubonisa umxhasi okhethekileyo owanikezela ulwazi oluninzi
I-Avibase iye ya tyelelwa 316,119,895 amaxesha ukususela ngo-24 Juni 2003. © Denis Lepage | Umthetho wabucala